Mari Yekufamba | ThatsLuck.com
Sezvo iwe ungangove watonzwisisa iyo nyowani roulette software Mari Yekufamba conceptually yakavakirwa pana mai vezvese zvemari zvinofambisa kukunda pa roulette, kana iyo martingale.
La martingale icho chikamu chekirasi yemazano anoshandiswa mukubhejera ayo akatanga uye akaona kupararira kwavo kukuru muzana reXNUMXth century France.
Iwo akareruka eaya marongero, iyo martingale, yakagadzirirwa mutambo wakaenzana zvikuru nemisoro kana miswe ine mari., iyo yaipa kuhwina kwekubheja kana misoro uye kurasikirwa mune miswe.
Martingale inoda kuti mutambi awedzere kubheja kwavo mushure mekurasikirwa kwega kwega, kuitira kuti kuhwina kwekutanga kuvezve nekurasikirwa kwese kwekare pamwe nekuhwina kwakaenzana nedanda rekutanga.
Kufunga kuti mutambi ane mari isingagumi inowanikwa, saka anogara achigona kuvhara kubheja kunotevera kuitira kurasikirwa, zvingave zvichikwanisika kusimbisa kutadza kwechirongwa ichi, nekuti munguva pfupi inotevera anozobuda misoro, kana Tsvuku semuenzaniso kana isu tichifunga mutambo weRoulette.
Nekudaro, muchokwadi, hapana mutambi anowanzo kuve nehupfumi hwakadai kuti akwanise kurarama nekuratidzira kukura kwedanda kana paine akawanda akateedzana akarasika uye kune izvi isu tinofanirwa zvakare kuwedzera miganho kubhejera dzinopihwa nemakasino ese epasirese , zvese chaizvo uye online.
Iyo manejimendi yakakwana
Kunyangwe chiri chokwadi kuti iyo martingale inotungamira mukuparadza mutambi nekuda kwezvikonzero zvataurwa pamusoro, ichokwadi zvakare kuti ndiyo yega sisitimu iyo mukushaikwa kwemari kana miganho yedanda yakazivikanwa kuva 100% yakabudirira.
Usati wagadzira iyo nyowani roulette software Mari Yekufamba Ini ndakazvibvunza ndega: zvinoita here kumisikidza mutambo mutambo uyo wakavakirwa pamisimboti imwechete seye martingale uye iyo isiri pasi pemari yemari kana yemipimo?
Chokwadi, kiyi (kana imwe chete yemakiyi anokwanisika) kuti ugare uchikunda pa roulette ichave yekuita iyo 25 kana 26-sitiroko martingale inotamba.
Asi chii chinorehwa nekugadzira martingale inotamba?
Chinhu chakakosha chaizvo chandakadzidza mumakore ano epurogiramu ndechekuti kuti unyatsozama kuhwina unofanirwa kutanga wanzwisisa kuti sei uchirasikirwa.
Iine iyo martingale iwe yaunorasikirwa kunyanya nekuda kwezvikonzero zvitatu:
► 1. rusununguko rwemunhu ega roulette spins (chinhu chinowanzo sarudzika nemutambi);
► 2. kasino yekubheja miganhu;
► 3. muganho wemutambi.
Kutanga kubva pakuongorora kweaya matatu akareruka asi asingakundike miganho, ini ndakaisa Mari Yekufamba semhando ye GPS Navigator, iyo inotangira kubva pakutanga base (iyo bankroll kwechikamu chimwe chete chemutambo), iwe unenge uchitungamira mutambi kuenda kwavanoenda kwekupedzisira, ndiko kuti iyo inodiwa kuhwina.
Usati watsanangura mashandisiro ayo Mari Yekufamba, Ini ndichatsanangura pamusoro pemafungiro api ayo akavakirwa: mukudzidzira kana isu tichitamba martingale hapana chatinoita kunze kwekukapeta kubhejera neimwe spin yakarasika, kudzamara isu takunda iyo yakakosha yuniti yekubheja.
Tichiongorora roulette spins zvakasiyana, tinogona kuona kuti vese vanobhejera vasina kuroora pamwe vangangoita 50% (48,65% kuva chaiyo) uye vanozvimiririra kune mumwe nemumwe (poindi 1 yeiri pamusoro runyorwa), mupfungwa yekuti ivo havasi tingave neruzivo runobatsira kubva kumhedzisiro yapfuura yekumisikidza mabheti edu anotevera.
Zvakanaka, ndakazvibvunza ndega: pane here mamwe emaroulette kubheja ane iwo mamwe ekubhadharisa muzana ezvakatenderedza 50%, asi izvo hazvipere nepfuti imwechete iyo inotungamira mukuwedzeredzwa kwekubheja?
Mhinduro ndeyekuti hongu, nekuti kana, semuenzaniso, isu tasarudza kutamba zvakatetepa kubheja kwe37 spins, tichigara tichitamba paRed, mukana wekuhwina "kanenge" 18 spins haisi 50%, asi 56%!
Izvi uye zvimwe zvinokwanisika kusangana zvinogona zvakare kusimbiswa newe, uchishandisa yemahara software ►Turbo Bet Calc.
Chekutanga pane zvese, ini saka ndakatsiva mukufunga kwangu kubheja kumwe chete neyakajairwa frequency ye48,65% ine akateedzana ekubhejera, ayo akazara aine frequency yakakwira zvakanyanya kupfuura 50%.
Mari Yekufamba saka zvakagadzirirwa kuhwina mari yakasarudzwa nemutambi, kana mamiriro azadzikiswa ekuti X kubhejera muY spins kwakundwa.
Usavhiringidze pfungwa dzinoshandiswa neinozivikanwa Masaniello nzira yekuverenga, zvirokwazvo fananidzo dzakawanda, asi muMari Rwendo danda rakazvimiririra padanda, sekungofanana nedanda rimwe chete.
Mari Yekufamba: iyo Software
Pane yedu ► video mugero iwe zvechokwadi uchawana mamwe mavhidhiyo anoratidzira maitiro ekutyaira mutambo wedu kuti uwane kukunda kwaunoda, zvisinei, ngatitange kubva pane zvekutanga sarudzo kuti unzwisise maitiro ekushandisa zvakanyanya ichi chinoshamisa chishandiso chatinacho.
Kana yangovhurwa, Mari Yekufamba inouya nemifananidzo mune yechokwadi GPS navigator maitiro, uko kuruboshwe kwedashboard tinowana marongero ekutanga erwendo, nepo kurudyi kune ruzivo rwakakosha kuti usvike kuhwina kwaunoda.
Ngatitangei nekukurumidza nepaneru kuruboshwe: mumunda Spins (modifiable) kukosha 37 kwakatosetwa, zvinoenderana nekutenderera kwakazara kweiyo manhamba eroulette, ayo ari makumi matatu nenomwe.
Munda Ruboshwe inoratidza (saka haigone kuchinjwa) huwandu hwespineti hunosara panoperera kutenderera uye nekudaro zvinodzikira ne1 kubheji yega yega.
Mumunda Chikamu Kukosha isu tinofanirwa kuisa kukosha kwedu bheji yekubheja, iyo inogona kuva 1 euro (saka isu tinosiya 1), kana 5 euro (saka unofanirwa kuisa kukosha 5).
Il bhatani rebhuruu pakarepo kurudyi (iyo ine mari) inoshandira Wedzera zviyero zvatinoda kuhwina pabhokisi chipfuro (mune repaneru rekurudyi), zvinogona kunge zviri kuita kwekupedzisira rwendo rwedu, kana kuhwina kwatinoda kusvika.
Saka kana ini ndichida kuhwina maeuro gumi nekutamba neyuniti yuniti ye10 euro, ini ndinopinda iyo kukosha 1 muUni Value munda uye tinya bhatani bhatani kagumi kuti uwedzere kukosha kuchakundwa uye kwandichaona zvichitaurwa mukati chipfuro kurudyi.
Mumunda Bet Min Ini ndinopinda iwo mashoma bheji anotenderwa patafura yandiri kutamba (yaishandiswa kuverenga kutenderera kwemabheti) uye mumunda Bet Max Ini handipinde kwete siringi yetafura, asi kubheja kwakanyanya kwandinofunga kuita.
Kumisikidza kubheja kwakanyanya sekuona kwaunoita kwakakosha, kutanga nekuti isu neimwe nzira tinoedza kugara kure nemuganhu wakatemwa nekasino (inogona kunge yakanyanya kukwirira, asi chero zvakadaro paunowedzera kusimudza kubheja kamwe chete, kwakanyanya zvirizvo, nekuti kuve vanhu vakazvimiririra vanorova, munguva pfupi chero chinhu chingaitika kwatiri), chechipiri nekuti, sezvaunoona, kana kubheja kuri padyo nemuganhu wedu, zvinoreva kuti chikamu chiri kufamba zvakashata saka mufambisi wedu anonyevera isu yengozi, tichikumbira 3 mikana yemitambo inogona izvo zvatichaona zvirinani gare gare.
Zviripachena kuti haugone kutamba neyakakosha yuniti ye5 euros uye woisa bheji yepamusoro ye7,5 euros (mumayedzo ekutanga ndakazviita uye ndikatobuda mumugwagwa mushure memakona mashoma ane njodzi), ngatiti izvo chiyero chakanaka chekubheja kwakapetwa ka10 chikamu chechigadziko, pamwe ne chipfuro chaicho chinofanira kuiswa ku 50% yemabhengi, izvo nekudaro zvinofanirwa kuve zvirinani pfuura pakanangwa.
Saka kana tichinyatsoda kuyedza kuhwina semuenzaniso maeuro e25, parwendo rwedu tinoda a kubhengi kwema50 euros, kutamba 0,5 yuniti yuniti uye isa Kubheja Max 5 euros (i.e. kanokwana kagumi chikamu chepasi).
Ngatienderere mberi nekuongorora kwepaneru kuruboshwe: Chance Selector inoshanda kusarudza mhando yekurwisa kwatinoda kuitisa.
Semuenzaniso, kana kuyedza kwedu kwekutanga kuhwina 18 kurova kunze kwe37 kuchikundikana nekuti tasvika pakubheja kukuru kana kuneta makumi matatu nemasere, kana zvakapfuura tinofunga kuti zvirinani kuchinja kurwisa nekuti kukosha Kuhwina% kurudyi iri padyo ne zero (kukosha uku kunoshandiswa kunzwisisa maitiro atinoiswa mukati merwendo, mukuita ndiyo muzana redu chairo remukana wekuhwina mapfuti akasara kuti asvike pachinangwa), tinogona kusarudza kuchinja marongero uye titange chidimbu chitsva 37 chinotenderera pamikana yakapusa, kana shandura mutambo zvachose uye enda mberi kubheja pane gumi nemaviri, chechitanhatu kana imwe yeimwe sarudzo dziripo.
Chero ipi sarudzo yandinosarudza, icharamba iri chiitiko pamwe ingangoita padyo ne60% uye nekudaro haigone kuchengetwa yakamirira kwenguva refu!
Mukuita, zano redu rinogona kupfupikiswa seinotevera: Ndinoedza kutamba matinji akawanda sezvinobvira kuyedza kuchengeta bheji pazasi peBet Max, kudzamara ndasangana nesangano rinonakidza (rinoverengeka rinowanzoitika kupfuura rakashata) rinoita kuti ndivhare mutambo.
Uyu mutambo wekutsungirira, paavhareji zvinotora kanokwana zvikamu zvitatu kuti usvike kumutsetse uyezve ingangoita 3 awa yekutamba pazvinofamba zvakanaka, ndosaka zvakakosha kuita bvunzo zhinji (chete pa roulette rarama zviripachena) kuti unzwisise zvirinani zvese zvinogoneka zvinogona kuitwa nemutambi kusvika pachinangwa chake
Nguva imwe neimwe tranche nyowani painotanga, tinya iyo Nyeredzi bhatani, izvi zvinoshandiswa kuverenga huwandu hwezvipenga uye zvinorova izvo zvinodiwa kuti uite chiitiko chine mukana wakakura kupfuura makumi mashanu muzana.
Semuenzaniso, kana sekurwisa uchida kusarudza makumi kana makoramu, uchimanikidza bhatani reStar uchaona kuti nzira yemutambo ichagadzirwa iyo ye37 spins ine mukana we44% uye izvi hazvina kunaka, kugadzirisa, pinda makumi mashanu pachinzvimbo che50 mundima yeSpins uye wobva wadzvanya paNyenyeri, uchaona kuti mukana uyu unokwira kusvika pa 37%, iine gumi nematanhatu rinokundwa mumakumi mashanu ekurukwa.
Pfuti yega yega yakakunda kana kurasikirwa iwe unofanirwa kubaya mabhatani kunda e rasikatichiri mumunda RNG Typ isu tine chipenga chisina kujairika chemabheti edu anogona.
Zviripachena hachisi chirevo, asi ini ndinogara ndichichishandisa nekuti ndakachiisa nenzira yekuti nditaure kubheja kwakasarudzika, asi kuti uchinje chete kana warasa bheji.
Nenzira iyi iwe unogona kutora mukana wakazara chero akateedzana kurohwa kwakakunda uye kana iwe ukatarisa iyo yekuratidzira vhidhiyo ye Mari Yekufamba pane iyo ► video mugero iyi sarudzo yakaratidza kuve boni chaiyo, kunyanya pakurwiswa kwechitatu kune gumi nevaviri / makoramu.
Pakupedzisira, mupaneru kurudyi isu tinowana:
►Stake: chiyero chedu bankroll (inogara ichatanga kubva pa zero pakutanga kwerwendo);
►Chivavarira: yakawanda sei yatinofanira kukunda kana tichienzanisa nechinangwa chekupedzisira (inoderera patinenge tichihwina uye ichiwedzera patinorasikirwa);
►Hits: iyo nhamba yepfuti yekuhwina kuti usvike patambo yekupedzisira;
►Win%: mukana wedu wekusvika kumutsetse wekupedzisira mune tranche yazvino;
►Next Bet: iyo mari yekubheja pane inotevera spin.
Kana iwe uchida kudzidza kutyaira mota yako nenzira yakanakisa uye woenda nayo kwauri kuenda kakawanda uye kazhinji, yeuka kuti:
Usamhanye, usatange chikamu chemutambo kana iwe usina kana maawa mashoma aunogona, kunyepedzera kunge uchifanirwa kutyaira makiromita mazana maviri mumamiriro ekunze asingafungidzike, saka unofanirwa kudzidza kutyaira nyatso nyorova, kuisa maketeni paanenge achinaya uye nekutsimbirira nesimba paacaster iyo zuva parinobuda.
Nguva dzese (uye zvinowanzoitika) kuti iwe unosvika paBet Max ivo varipo 3 zvingangoita sarudzo: 1 tanga musangano mutsva nekuvavarira mukana iwoyo, 2 tanga musangano mutsva nekuchinja mikana, 3 tanga chikamu chitsva nekuwedzera huwandu hwespin kuti utambe.
Dzese idzi sarudzo dzine imwechete uye yakakosha chinangwa: dzikisa kubheja kwekutanga.
Saka zviri kumutambi kuti anzwisise chikamu chaari kupfuura nacho uye kutora (kana kuyedza) zano rakanakisa rekuenderera mberi nerwendo rwake akananga kuchinangwa chakakodzera.
Ini ndinokurudzira zvikuru, mushure mekuverenga zvese zvakanaka posvo, kuti utarisewo vhidhiyo pane yedu ► canale, chikamu chakataurwa muvhidhiyo chinonyatsoita zvirinani nezvandakaedza kutsanangura pano nemazwi.
Nakidzwa pamwe Mari Yekufamba uye usakanganwe kunyorera kuchiteshi cheTeregiramu kana iwe uchida kufanoongorora nhau dzese muchirongwa.
File Download	MTrip.zip - 2 MB